Ziziphi I Stores Chocolate Best EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ziziphi I Stores Chocolate Best EYurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 08/01/2021)
Kwilizwekazi laseYurophu ngokubanzi lalidume itshokolethi layo amazing kwaye emnandi. Inyaniso, chocoholics ezininzi enjoy nithi ezihambela yokuba ithuba lokuba beve ezinye intlobo emangalisayo phakathi nohambo lwabo. Ukuba wenza indlela yakho nge eYurophu sidumise chocolate, esinayo iindaba enkulu kuwe! Gcina A Isitimela Ndajonga le ndawo itshokolethi yaseYurophu kwaye liye lalungisa uluhlu 10 Iivenkile best chocolate eYurophu. Ukuba uzifumana kwenye kula mazwe, kwaye ufumana ecinga itshokolethi ethile emangalisayo, thatha ixesha lokuba kutyelela enye yezi ndawo. Akuyi bendingedaniyo.
France phakathi kwamazwe amaninzi kakhulu ngoziro itshokolethi yayo. Wena Qiniseka ukubona ezininzi kwiivenkile chocolate ngelixa indlela yakho kwizitrato eyinkunzi. Inyaniso, usenokuba wehlelwe kunye nenani leevenkile chocolate nazo. Ukuze uqinisekise ukuba babone eParis omkhulu ukunikela, sacela emhlabeni ukuba kufuneka utyelelo itshokolethi ivenkile e-Paris. Abaninzi Waphendula ukuba kufuneka ube Debauve and Gallais. Le venkile kumnandi nje kuphela omdala esixekweni, kodwa classic. Kuye kwavulwa 1800 waza wadala itshokolethi nandi uluntu ukususela. Inyaniso, ukuba wawumkhulu kangangokuba xa bevula ukuba baba abathengisi chocolate ukulungiselela i-French weNkundla kunye uNapoleon. Ezininzi iinkokeli ezinkulu French babenobuhlobo chocolate lwabo, kwaye ngoko ke ungakwazi.
Xa kuziwa Italy, ngokuphathelene ezininzi Viziovirtù njengoko indawo kumelwe-utyelelo kubathandi chocolate. Ivenkile popular ise embindini yaseVenice kwaye chocoholics dream. Yonke into evenkileni yi tshama na izithako engcono. Banikezela ngomxube ogqibeleleyo weencasa ezimangalisayo kunye nomoya omnandi waseVenice. Inyaniso, ifilosofi babo Chocolate umdla. Ukuba ukulandela iindlela zemveli kunye nokuyenza yonke into ngesandla. Dibanisa ukuba kuphela izithako best, kwaye kufuneka undwendwele indawo embindini weVenice.
I-Netherlands Kudla ngokungabikho indawo yokuqala ethi qatha engqondweni xa ucinga yetshokholethi. kunjalo, kusenjalo indawo enkulu ukunambitha ezinye iitshokolethi ilungileyo kulo lonke ihlabathi. Enye kwiivenkile ezininzi ethandwayo e Amsterdam. Vanroselen Kufuneka undwendwele nabani na ojonge ukuzama itshokholethi ekumgangatho wehlabathi. Yonke into kwivenkile yabo ngesandla, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth watering treats.
Ukuba uhamba Luxembourg, qiniseka ukuba stop yile ivenkile itshokolethi enisinike eliye laba igama lonke. kunjalo, i original lo Chocolate House of Luxembourg ibekwe malunga Grand Ducal Palace, kwaye likhaya ezinye indalo best chocolate ehlabathini. Ezikufutshane lwasebukhosini, unokuqiniseka ukuba zinika kuphela best. Uyakuthanda a wasemazulwini amava kunye ezinye eyona flavors ehlabathini.
Ukuba ukhe uthathe uhambahamba kwisithili esisityebi of Hietzing e Vienna, siyokundwendwela Xocolat Manufaktur. Kule ivenkile fantastic, uyakwazi ukufumana ezinye chocolate kakhulu eYurophu. Thaca kwiglasi istili bonke ukubona, ungabona ezinye iintlobo ezininzi ukucokisa ngetshokholeythi kweli lizwe. Ungaya apho ukonwabela chocolate okanye ukuba beze kumasifundisane yaye bafunde kancinane malunga ikhono lokwenza chocolate.
6. UErich Hamann
Ukuba ukhangela ivenkile leyo esisityebi kwimbali ukunambitheka, koko jonga ngokwenza UErich Hamann e West eBerlin. Zimbini izinto ezenza kulevenkile ume ngaphandle. Okokuqala, ke imbali emangalisayo ukuxhotyiswa ngokwayo. Yaqala ukuba 1928, yaye zibekwe ngendlela Bauhaus kwisakhiwo indlela aphila kwimfazwe yehlabathi yesibini. Okwesibini, kuyinyhweba yabo izithethe kunye nemvakalo enkulu. Abazange babe iresiphi original evela kwiivenkile ukuvulwa kunye nothando kugqaliselo kwi chocolate emnyama. kunjalo, ukuba baze itshokolethi emhlophe kunye nezinye ezahlukeneyo. ixolo yabo chocolate na engundaba mlonyeni, ngoko ke, qiniseka ukuba zama ke ukuba ufuna ndwendwela i-store.
7. Best Chocolate Stores In Bruges – Le Chocolate Line
Belgium phakathi zihlanjiwe xa kuziwa kumba nobuciko chocolate. Ukuhamba kwimizi ngemizi Belgium, uya kubona kakhulu yimithamo emnandi kwisikrini. Enye yeendawo ifanelekileyo ukufumana chocolate Intle le Le Chocolate Line e Bruges. Le lokulondoloza utyelelo kumelwe ukuba nabani eyonwabela intwana omhle chocolate. Kukho iweb eninzi flavour emveli kunye emnandi kunye iitshokolethi zovavanyo ukukhetha ukusuka. Yintoni eyenza Chocolate Umgca ume ngaphandle inqubo yabo yokwenza yetshokolethi. Benza ngqo chocolate ukusuka imbotyi yaye ezizodwa izixhobo ukugaya ngokuxuba yetshokolethi. ixesha elizayo wena ku Bruges, thatha ixesha ukuze ibabe ezimangalisayo kunye namava ngokugqibeleleyo kwi The Chocolate Line.
Switzerland idume itshokolethi yayo. Inyaniso, sinako kumbulela itshokolethi yobisi ukuya Swiss. Xa ufika kwilizwe, uya kuqaphela ukuba itshokolethi yonke indawo. Phantse kuyo yonke indawo usiya uzele yeevenkile chocolate umnikelo kukulunywa ukuba adle. Ukuba ufuna ukufumana Switzerland omkhulu ukunikela, abaninzi bayavuma ukuba Max Chocolatier Ingaba i indawo ephelele ukuze ukuhambela. Kuyinto oyithandayo lendawo, yaye unesizathu esihle. Basebenzisa izithako timfanelo tihi kwaye bavelisa ezinye itshokolethi best Switzerland. Kananjalo abe unique, ezine zonyaka menu eyenza ntlobo chocolate yamaxesha. Ukuququmbela, unokufumana iintlobo zokutya neencasa, kuxhomekeke xa ubandwendwelayo-store.
Zurich ku Lucerne Uqeqesha
Bern ku Lucerne Uqeqesha
EGeneva ku Lucerne Uqeqesha
Konstanz ku Lucerne Uqeqesha
9. Best Chocolate Stores In Budapest – Chocolate Rozsavolgyi
Hungary i gem efihlakeleyo ye chocoholics. Benza ezahlukeneyo dessert ezimangalisayo, kunye iitshokolethi zabo ezizodwa. A kufuneka atyelele ukunandipha chocolate emangalisayo kukuba Chocolate Rozsavolgyi e Budapest. Inikezela ngelona ezininzi ephatha ngobulawu, okubaluleke, dalo chocolate emangalisayo. chocolate labo baphumelela udumo ngamazwe kunye bonbons zabo chocolate, yaye xa uzama kubo, kucacile ukuba kutheni. izityebi, nezamkelekileyo Ulahlekwe siyamkholisa yasezulwini. Misa by you are ojikelezayo ukuba Budapest.
Lokugqibela kuluhlu lwethu of 10 Best Chocolate Stores In naseYurophu Sprungli. Ukuba ukhangela indawo leyo Liquka ingcamango wezinto itshokolethi Swiss, khangela ngakumbi kunokuba Sprungli e Zurich. Le venkile kwavulwa 1859 kwaye wenza emangalisayo, dalo chocolate oludalwe ukususela. Ukuba ufuna ukuba itshokolethi enkulu eyenziwe ukusuka kunazo izithako, ahambele Sprungli.
Ukuququmbela, IYurophu indawo umdla kumntu lowo ufuna itshokolethi engcono kunye noovimba best itshokolethi okanye nje fan Chocó.
Ingaba ukulungele ukufumana chocoholics iparadesi ngexesha next uhambo nge Europe? Incwadi A Train iTikiti sakho banqwenela engqongileyo kwaye incasa bonke abo bathe ukunikela.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Best Chocolate Stores EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha /yona /tr okanye /de kwaye ngaphezulu iilwimi.
#candyshop #shops chocolate europetravel Ukutyazana